Tag: kuratidza kushambadzira | Martech Zone
Tag: kuratidza kushambadzira
Global media media inopera iri kuwedzera pamwero we5.1%, inotarisirwa kusvika $ 2.1 trillion mu2019, sekureva kwaMcKinsey. Dhijitari kushambadzira inopedza kugadzirira kushandisa mari yeTV muna 2018. TidyMarketer yatanga danidziro yekushambadzira nemushambadziro wezvekuvaka, karenda yemushandirapamwe, mishumo yakazvimiririra uye nezvimwe zvakawanda, zvekushandira pamwe zvikwata zvekushambadzira uye vamiririri. Iyo SaaS chikuva inobvumidza vashambadzi kuronga, kuronga, kubatana, uye kuyera zvese mushandirapamwe manejimendi kubva kune imwechete chikuva. Yakagadzirirwa ku
Nepo iyi infographic kubva kuDatadial inotaura nezvebhizimusi diki, ndichave akatendeseka kuti tinoshanda nemamwe mabhizinesi uye mabhizimusi makuru asingatore mukana wezhinji emazano aya! Iri rinogona kunge riri runyorwa ruzere rwemazano andakaona kana zvasvika pakushandisa mubhadharo pakushambadzira paGoogle zvinobudirira. Zvisinei nezveindasitiri yako, iwo matekiniki aunogona kushandisa kuita kuti hupenyu huve nyore kune manejimendi ePPC anoramba akafanana. Izvi infographic
Mune zvese zvakabhadharwa zvekutsvaga, kuratidza uye kushambadzira nhare, pane yakawanda hesera yekutenga zvionekwe pairi. Kuti uwane mhedzisiro yakasimba, iwe unofanirwa kunge uri kuyedza kutengwa kwemazana kana kunyange zviuru zvemisanganiswa yemazwi pakutsvaga kwakabhadharwa. Kana iwe uri kuratidza kushambadzira kana kushambadzira nhare, iyo hesera inogona kupararira pakati pemazana kana zviuru zvemasaiti kana maapp. Chii chiri Chaicho-Nguva Kubhidha? Kuzviongorora nemaoko uye kubhidha panzvimbo dzaunoda